सुरक्षा नेतृत्वको कालापानी भ्रमण, भारतीय फौज हटाउन मनोवैज्ञानिक दबाब « गोर्खाली खबर डटकम
सुरक्षा नेतृत्वको कालापानी भ्रमण, भारतीय फौज हटाउन मनोवैज्ञानिक दबाब
काठमाडौं : भारतबाट अतिक्रमित भूमि समेटिएको नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन संसदबाट पारित हुँदै गर्दा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल कालापानी पुगेर फर्केका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षाको सर्वोच्च अंग नेपाली सेनाका प्रमुख र सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्रका प्रमुखको यो भ्रमणलाई एउटा नियमित सिलसिलाको रुपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो आफैमा महत्वपूर्ण घट्नाक्रम हो।
जुन परिवेशमा यो भ्रमण भएको छ, त्यसले कुटनीतिक तथा सामरिक दुवै तहमा एउटा सन्देश प्रवाह गरेको छ। यो विषयले मिडिया र सामाजिक संजाललाई पनि तरंगित गर्‍यो। भारतीय मिडियामा समेत यो भ्रमणको पर्याप्त चर्चा भयो भने उत्तरतिरबाट पनि यसमा चासो प्रकट भएको छ। सुरक्षा वृत्तमा पनि यसबारे विभिन्‍न कोणबाट बहस पनि भएको छ।
सेनापति थापा र आइजीपी खनाल भ्रमण गरेको दार्चुलाको छाङरु र घाटीबगर त्यही क्षेत्र हो, जुन भारतले अतिक्रमण गरेर फौज राखेको नेपाली भूमि कालापानीबाट झन्डै १० किलोमिटरको दुरीमा पर्छ। छाङरुमा सशस्त्रले बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरेको छ। छाङरु नजिकै घाँटीबगरमा सेनाको अस्थायी क्याम्प बसेको छ।
सेनापति र आइजीपीले यी दुवै बेसको निरीक्षण गर्दै त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई उच्च मनोबलका साथ खटिन हौसला दिएका छन्। आफ्नो भूमि सुरक्षाका लागि संवेदनशिल हुन निर्देशन पनि दिएका छन्। ‘ढुक्क भएर सीमा रक्षा गर्नुस्, केही परे सेनाले साथ दिन्छ’ भनी सेनापतिले दिएको सन्देशले सुरक्षा फौजमा बेग्लै उर्जा पनि प्रवाह गरेको छ। सेनापति र आइजीपीसँगै सदूरपश्‍चिम प्रदेशका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अधिकारीहरु त्यहाँ पुगेका थिए।
सुरक्षा कमान्डरहरूको यो निरीक्षण, निर्देशन अनि प्रतिवद्धताले आफ्‍नो भूगोलको सुरक्षाप्रति राज्यको संवेदनशीलता झल्किएको छ। नागरिकस्तरमा यसको स्वामित्व अनूभूति पनि भएको छ। खासगरी भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सामरिक रुपमा संवेदनशील मानिएको यो क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता र सक्रियता बढाइएको हो। वैशाखको अन्तिम साता शसस्‍त्रको बीओपी स्थापना भयो भने जेठको पहिलो हप्ता सेनाको अस्थायी क्याम्प बस्यो।
उसले ब्यास आउजाउ गर्ने सडक खनिरहेको छ।छाङरु आसपासका बासिन्दा ब्यासबाट सदरमुकाम आउन जान भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतीय भूमि टेकेर गाउँ पुग्‍नुपर्ने वाध्यतामा रहेका स्थानीयमा बन्दै गरेको यो बाटोले बेग्लै खुसी संचार भएको छ। दार्चुलाको खलंगामा रहेको सशस्त्रको गुल्मलाई छिटै गण बनाइने महानिरीक्षक खनानको प्रतिबद्धताले सीमा सुरक्षा कसिलो बन्दै जाने संकेत दिएको छ।
दुःखद खबर ओच्छ्यानमा राखिएको मोबाइल पड्कियो, १४ वर्षीया किशोरीको मृत्यु!!
एका बिहानै माता मनोकामना माइले सबैको रक्षा गरुन,हेर्नुहोस राशिफल : मंसिर ३ गते बुधवार तपाइको आजको भाग्य कस्तो रहला ? पुरा पढ्नुहोस !